AMISOM Oo Abaabulaya Qorshahooda Bixitaanka Xilli Aanan Kalsooni Lagu Qabin Isku Filnaanshaha Maleeshiyaatka Soomaalida (WARBIXIN) – Calamada.com
calamada July 2, 2018 4 min read
Madax iyo ergooyin ka socda gaalada QM, Midowga Africa, saliibiyiinta reer Yurub, iyo kooxda ridada ayaa bishii January ee horaantii sanadkan ku kulmay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho si ay isula meel dhigaan qorshaha bixitaanka ciidamada Kuffaarta Afrikaanta eek u naafoobay dagaalka ay kaga jiraan Soomaaliya iyo diyaarinta maleeshiyaatkii la wareegi lahaa mas’uuliyada ammaan ee kooxda ridada.
Kulankaas oo dadka soo xaadiray uu ka mid ahaa Ra’isul wazaaraha kooxda ridada, Murtad Xassan Cali Khayre ayaa lagu soo magacaabay guddi dhexe oo loo xil saaray dajinta mashruuca kala wareegga amniga ka dib bixitaanka ciidamada saliibiyiinta.
Howlaha ugu muhiimsan ee gudigaas ayaa xilligaas lagu sheegay:
in ay u kuurgalaan xaaladda amaan ee dalka Soomaaliya.
wada shaqeynta amni ee ka dhexeysa Kooxda Farmaajo iyo maamul-goboleedyada ridada ah.
iyo diyaarinta Maleeshiyaatkii la wareegi lahaa goobaha ay ka baxaan Kuffaarta Afrikaanta.
Faransiisko Madeera oo ku magacaaban wakiilka midowga gaalada Africa u qaabilsan Soomaaliya ayaa todobaadkii la soo dhaafay booqasho qaadatay saddex maalin ku tagay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo si uu u soo qiimeeyo waxa bilooyin ka dib ka qabsoomay diyaargarowga loogu jiro in Maleeshiyaatka Soomaalida lagu wareejiyo mas’uuliyada amaan ee goobaha ay murtadiintu ku suganyihiin.
Madeera waxa uu sheegay in qorshaha bixitaanka ciidamada isbaheysiga uu bilowday bishii December ee la soo dhaafay markii cadadka askarta laga dhimay ilaa 1,000 askari, waxaana uu tibaaxay in hadda uu talisku u diyaar garoobay qorshaha wareerjinta mas’uuliyada amaan ee wadanka.
:Waxaan ku jirnaa xaalad kala guur ah, waxaana na looga baahanyahay inaan u diyaar garowno marxaladaas kala guurka ah. Waxaan halkan u imid inaan arko wixii noo qabsoomay, waxa aan u baahanahay, iyo caqabadaha laga yaabo inay naga horyimaadaan” ayuu yiri.
Shaxda bixitaanka ciidamada Kuffaarta Afrikaanta iyo diyaarinta maleeshiyaatka murtadiinta wuxuu ka mid ahaa qodobadii lagu soo dajiyey shirkii London ee sanadkii hore, waxayna inta badan mas’uuliyada howshaas ku dhaceysay kooxda ridada iyo dhamaan maamul-goboleedyada ashahaada la dirirka.
Go’aanada ka soo baxay shirka Landon waxaa ka mid ahaa in maamul-goboleed kasta uu diyaariyo ugu yaraan 3000 oo askari, ka dibna la dhiso ciidamo isku dhaf ah oo gaaraya ilaa 18,000 oo askari kuwaas oo lagu wareerjin doono amaanka goobaha ay isaga baxaan ciidamada saliibiyiinta.
Ma jiro hal maamul-goboleed oo ilaa hadda soo wareerjiyey ciidamadii laga sugayey marka laga reebo maamulka Ashahaada la dirirka ah ee Puntland oo mar soo bandhigay ciidamo gaaraya 2,400 oo ay sheegeen in ay ku wareejin doonaan kooxda ridada balse aanan dib loo arag wixii markaas ka dambeeyey.
Socdaalka saddexda maalin qaatay ee uu Faransiisko Madeera ku tagay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo ee loogu kuurgalayey xaaladda amni iyo isku filnaanshaha murtadiinta waxaa ku wehlinayey Lisa Filipetto oo ah madaxa xafiiska taageerada QM ee Soomaaliya.
“Waan ognahay caqabado badan ayaa ku horgudban qorshahan, mana ahan arin sahlan, balse waxaa jirta aragti iyo go’aan siyaasadeed oo adag. Kaalinta UN-kuna waa inaan taageerno qorshahaas” ayey tiri.
Jubaland & Koonfur-Galbeed
Wafdigan ayaa kulamo la qaatay hogaamiyeyaasha maamulada Ashahaada la dirirka ah ee ka taliya Baydhabo iyo Kismaayo, waxaana umuuraha ugu waaweyn ee la isla gorfeeyey ka mid ahaa halista amni ee weli taagan oo ay mid tahay in weli anaan lagu guuleysan furitaanka wadooyinka waaweyn ee ay magaalooyinka sida uu tibaaxay murtad Shariif Sakiin oo ah hogaamiyaha maamulka ashahaado la dirirka ah ee isku magacaabay Koonfur-Galbeed.
Maamulada ridada ee ka taliya Kismaayo iyo Baydhabo oo ah rajada ugu weyn ee uu cadowgu fiirsanayo ka dib bixitaanka ciidamada saliibiyiinta ayaan ilaa hadda ku guuleysan in ay dagaalada ka soo fogeeyeen magaalooyinkooda, iskaba daa in ay la wareegaan dhufeysyada ay faarujinayaan ciidamada saliibiyiinta.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa dhowrjeer cagta mariso saldhigyo ciidan oo ku yaalla duleedyada magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo ka dib markii ay weeraro ballaaran ku qaaday xarumaha maleeshiyaatka murtadiinta ee maamuladaasi taas oo abuurtay walaac iyo rajo beel laga qabo isku filnaanshaha murtadiinta.
Waxay sidoo kale Mujaahidiintu go’doomiyeen isku socodka magaalooyinka iyo saldhigyada ay cadawgu ku suganyihiin, waxayna ku guuleysteen in murtadiinta iyo ciidamada saliibiyiintuba uu ka go’aan isticmaalka gaadiidka dhulka, una weecdaan gaadiidka hawada sida uu horay u sheegay Shariif Sakiin.
Maamulada Taagta Daran
Michel Keating, wakiilka gaalada QM u qaabilsan Soomaaliya oo bishii May ee sanadkan qadka Video-ga kaga qeybgalay shir ay yeesheen golaha amaanka ee QM ayaa xaqiijiyey inuu bilowday abaabulka qorhshaha bixitaanka ee Kuffaarta Afrikaanta inkastoo uu cabasho ka muujiyey halista amni ee ay wajahayaan, wuxuuna tilmaamay in beesha gaalada Caalamka ay ka go’an tahay in kooxda ridada ay la wareegto mas’uuliyada amaan ee wadanka.
Sanadkii la soo dhaafay ee 2017-ka, wuxuu isbaheysiga Kuffaarta Afrikaanta dhimay tirada ciidanka ka jooga Soomaaliya, iyagoona talaabadaas ku tilmaamay mid hordhac u ah qorshahooda bixitaanka, waxayna tilmaameen in gabagabada sanadkan 2018-kana ay cadadka ciidankooda ka sii dhimi doonaan ugu yaraan 1,000 askari.
Arinta shaki la’aanta ah ee la wada hubo ayaa ah in saliibiyiintu isaga huleeli doonaan wadanka xilli aanan fogeyn balse su’aasha isweydiinta mudan waxay tahay: Yaa taban-taabin doona maamulada ridada taagta daran ee ay ka tagi doonaan.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 18-10-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 19-10-1439 Hijri.